Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Firenena afrikanina 9 amin'ny 10 no vonona hametraka tanjona vaksinin'ny COVID-19 maika » Page 2
Ny fampandrosoana dia tonga araka ny nambaran'ny WHO tamin'ny alakamisy fa sambany tany Eropa hatramin'ny volana aogositra lasa teo, ny fahafatesan'ny COVID-19 dia latsaka ambany 10,000 tao anatin'ny herinandro.
Tamin'ny fanavaozana tsy tapaka, nanamarika ny masoivohon'ny fahasalamana UN fa nihena ny tranga, hopitaly ary maty tao amin'ny faritra nandritra ny roa volana misesy.
Nahatratra 368,000 XNUMX ny tranga vaovao notaterina tao anatin'ny fito andro farany, izay ampahadimin'ny tranga isan-kerinandro notaterina nandritra ny tampon'isa farany teo tany Eropa tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity, hoy ny Dr. Hans Kluge, talen'ny faritra eropeana ho an'ny Eropa.
Nomarihiny fa ny Faritra eropeana dia nahita tranga 55 tapitrisa voamarina fa maty COVID-19 sy 1.2 tapitrisa, izay manodidina ny ampahatelon'ny caseload manerantany.
Dosis mahery mihoatra ny 400 tapitrisa amin'ny vaksinin'ny COVID-19 no notanterahina tao anatin'ny enim-bolana farany, hoy ny fanamarihan'i Dr Kluge, midika izany fa 30 isan-jaton'ny eropeana no nahazo fatra vaksiny iray farafahakeliny ary 17 isan-jato no voatsabo tanteraka.
"Ny fandrakofana vaksiny dia tsy ampy hiarovana ny faritra (eropeana) amin'ny fitsanganan'ny maty", hoy ny fanazavan'ilay tompon'andraikitra ao amin'ny WHO. "Ny halavirana aleha alohan'ny hahatratrarana olona 80 isanjaton'ny olon-dehibe farafahakeliny dia mbola lehibe."
Olona mihoatra ny 70 dia atahorana ho tratry ny aretina mahery na fahafatesan'ny coronavirus 800 heny, hoy hatrany izy, ary nanitrikitrika fa "laharam-pahamehana maika" ny fiarovana hatrany ny zokiolona, ​​ireo olona voan'ny comorbidities ary mpiasa eo aloha izay "mijanona tsy voaaro" ao anaty isan'ny firenena eropeana.
"Miaraka amin'ny fitomboan'ny fivoriana ara-tsosialy, ny fivezivezen'ny mponina betsaka kokoa, ary ny fetibe ary ny fifaninanana ara-panatanjahantena lehibe mandritra ny andro sy herinandro ho avy, miantso fitandremana ny WHO-Europe", hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny WHO nanampy.
Mitohy ny fifindran'ny vondrom-piarahamonina, hoy hatrany i Dr. Kluge, ary nanampy fa ny karazana Delta coronavirus vaovao izay mampiseho ny fitomboan'ny fifindra-monina dia “vonona hihazona”, raha olona marefo mihoatra ny 60 no mijanona tsy voaro.
Nasongadin'ilay tompon'andraikitra ao amin'ny firenena eropeana ny fisorohana ireo fitoviana tamin'ny fahavaratra lasa izay, rehefa niakatra ho antokon'olona antitra izy ireo, mba hisorohana ny "fitomboana mamoa, famonoana ary famoizana ain'olona" mandritra ny volana mafana.